Landa iividiyo ze-Instagram: Iindlela ezi-7 zokwenza ▷ Abalandeli ▷ ➡️
Khuphela iividiyo ze-Instagram: Iindlela ze-7 zokwenza
NgoJanuwari 2, 2019 0 IiCententarios 1171
Iividiyo ze-Instagram yindlela esinokuthi sonke silinganise ukuthandwa kwethu kwi-Intanethi, okanye hayi. QKwenzeka ntoni ukuba ufuna ukukhuphela iividiyo ze-Instagram, wabelane nabo kwaye ubabone ngexesha labo elikhululekileyo?
Nokuba kuyindalo emangalisayo okanye umxholo osemgangathweni kubahlobo bakho, ukukhuphela iividiyo ze-Instagram ngumoya. Khetha nje enye yezi ndlela zingezantsi kwaye ufumane imixholo ngoku. Sikuxelela nawe Ufumana njani abalandeli abaninzi.
1 Ukukhuphela ividiyo ye-Instagram
Iyafumaneka kwi: Android
Abasebenzisi be-Android banokufumana uninzi lwezicelo ezikhethekileyo Khuphela iividiyo ze-Instagram kwiVidiyo kaGoogle (iingcebiso zokusebenzisa iGoogle Play Store).
Enye yezona zinto zaziwayo yiVidiyo yokuLanda i Instagram. Ikuvumela ukuba ukhuphele okanye uphinde uthumele iividiyo ze-Instagram ngempompo enye. Isicelo sinokukhuphela iithegi ezihamba neevidiyo.
Umxholo okhutshelweyo wongezwa ngokuzenzekelayo kwisicelo segalari kwifowuni yakho.
Iyafumaneka kwi: Android, iOS, web
Ngaba uyafuna ukukhuphela zonke iividiyo kwi-Instagram? Okanye mhlawumbi gcina iividiyo ze-Instagram ozithandayo? Ungaqwalasela i-applet ye-IFTTT. Ukuze i-applet isebenze, uyakufuna iakhawunti ye-IFTTT, iakhawunti ye-Instagram, kunye nefayile ye- lwebhokisi.
Iziphumo yinkqubo ezenzekelayo apho nayiphi na ividiyo ye-Instagram oyongezayo okanye oyithandayo ikhutshelwa ngokuzenzekelayo kwaye yongezwa kwifolda oyikhethileyo yeDropbox. Yintoni enokuba lula kunaleyo?
Iyafumaneka kwi: Web
I-PostGraber yahlukile kwezinye izixhobo zokukhuphela ezisekwe kwi-Instagram. Ngelixa uninzi lwazo lunokuthimba kuphela isiqwengana somxholo ngeposi nganye, iPostGraber inokuzikhuphelela zonke iifoto kunye neevidiyo ezinxulumene nesithuba esinye.
Into oyifunayo yi-URL yeposti ye-Instagram ofuna ukuyikhuphela. Ungayifumana kwi-mobile app ngokuya Khuphela ikhonkco, okanye kwibar yendawo yedilesi kwisicelo sewebhu.
Namathisela i-URL kwibhokisi yewebhusayithi ye-PostGraber kwaye ucofe kuyo Ir. Isicelo sewebhu siyakukhathalela konke okunye.
Qaphela: Esi sicelo sisebenza kuphela ngeposti ye-Instagram yoluntu.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yintoni i-Instagram enokuyenzela ishishini lakho?
IDredown, esabizwa ngegama layo elidlulileyo, i-Instadown, yenye yezixhobo zokuqala zokukhuphela iividiyo ze-Instagram, kwaye isasebenza.
NjengePostGraber, lonke iDredown kufuneka lisebenze yi-URL. Cola i-URL kwibhokisi kwaye ucofe Ukutsalwa . Kwimizuzwana embalwa, isikhangeli sakho siza kuqala ukukhuphela ifayile ye-MP4.
IDredown isebenza ngeenkonzo ezingaphezulu kune-Instagram nje. Ungayisebenzisa ukukhuphela umxholo kwiYouTube, Facebook, Keek, Twitter, Twitch, Vineo, Vimeo, Metacafe, Vevo, Kohtakte, naseTumblr. Kuzo zonke iinkonzo ezixhasayo, ufuna kuphela i-URL yeposi, ividiyo, okanye ifoto ofuna ukuyigcina.
Ifumaneka kwi: iOS
Kulungile, ke sigubungele ii -apps ze-Android kunye newebhu. Kodwa ungazikhuphela njani iividiyo ze-Instagram kwi-iOS?
Ewe, kukho usetyenziso oluninzi kwiVenkile ye App ethi ikwazi ukukhuphela iividiyo, kodwa zihlala zizele ziintengiso kunye nokuthenga ngaphakathi kwesicelo kwaye kunzima ukuzisebenzisa.
Ukwahluka nguRegrammer. Uhlelo lokusebenza lusimahla, kwaye nangona luxhaswa ziintengiso, iintengiso azicaphukisi.
Kwakhona, uyakufuna i-URL yevidiyo ye-Instagram ofuna ukuyikhuphela ukuze isebenze. Xa unayo, vula iRegrammer app, uncamathisele i-URL, kwaye ucofe Jonga kuqala .
Kwiphepha lokugqibela, unokukhetha ukukhuphela ividiyo kwifowuni yakho okanye ukuyipapasha kwakhona ngegama lakho.
Layisha: Regrammer (Simahla)
6. I-OG Instagram
I-OG Instagram ayikho kwiVidiyo kaGoogle. Ukuyibeka ezandleni zakho, kuya kufuneka ukhuphele usetyenziso kwisixhobo sakho se-Android.
Insiza ayisiyondlela nje yokukhuphela kunye nokugcina iividiyo ze-Instagram kwi-Android, ikwaboniswa ngokupheleleyo ekuvumela ukuba ulandele ii-hashtag, usebenzise iiakhawunti ezimbini kwakwisixhobo esinye, jonga umfanekiso weprofayile yabasebenzisi (cofa ixesha elide), kunye yabelana ngee-URLs kwizicelo zangaphandle.
Layisha: I-OG Instagram (Simahla)
Sikushiya nesicelo esinye sewebhu. Kuhlala kububulumko ukugcina ii -apps ezimbalwa zewebhu zokukhuphela iividiyo ze-Instagram kwindawo yakho yokugcina izixhobo, njengoko zihlala zihla iintsuku ezimbalwa ngexesha.
Okwangoku, uya kube uqhelene nenkqubo yokusebenzisa le nkonzo. Fumana i-URL yevidiyo okanye umfanekiso owufunayo, emva koko uncamathisele kwi-app yeGramblast kwaye ucofe Ukukhuphela .
Kuxhomekeka kubungakanani befayile, kuya kufuneka une-MP4 entsha kwikhompyuter yakho kwimizuzwana embalwa. Ungasebenzisa ividiyo ukuyilayisha kwakhona kwinethiwekhi eyahlukileyo, okanye ugcine nje kwi-hard drive yakho ukuze ubhekise kuyo kamva.
Khumbula ilungelo lokushicilela kwiividiyo ze-Instagram
Njengoko kulula njengoko Khuphela iividiyo ze-instagramUngalibali ukuba awunawo amalungelo kwiividiyo ongazenzanga.
Ewe unokuzikhuphela. Ewe, unokuyonwabela. Kodwa musa ukuhlawulisa njengeyakho, okanye usasaze ngayo nayiphi na enye indlela, ngakumbi ngaphandle kokunika ityala elifanelekileyo. Awungethandi ukuba benze okufanayo nakuwe.
Ezinye iindlela zokukhuphela iividiyo ze-Instagram
Ukuba ezi zixhobo zisixhenxe aziziniki iziphumo ozifuna ukukhuphela iividiyo ze-Instagram, zikho ezinye iindlela ezongezelelweyo onokuzisebenzisa.
Umzekelo, ungasebenzisa enye yezicelo eziqhelekileyo ezikuvumela ukukhuphela iividiyo zokusasaza kwiiwebhusayithi. VideoGrabby, Video DownloadHelper, kunye neFreeemake Video Downloader zonke iindlela ezinokukhethwa kweli sebe.
Unokuthanda ukwazi ngakumbi malunga izibalo kumaBali e-Instagram.
1 1 Ukukhuphela ividiyo ye-Instagram
2 2. IFTTTT
3 3. IPostGraber
4 4. Ukuhla
5 5 Umbhaliso
6 6. I-OG Instagram
8 Khumbula ilungelo lokushicilela kwiividiyo ze-Instagram
9 Ezinye iindlela zokukhuphela iividiyo ze-Instagram
Ukuthengisa kwi-Intanethi kunceda njani inkampani yakho ukuba yamkelwe
Ungawasebenzisa njani amabali e-Instagram kwiShishini lakho